I-China i-500ml i-Oyili emnyama ka-Mnyama kunye neViniga Cruet enezidumbu kunye nomzi mveliso wabasebenzi kunye nabaxhasi | IHoyer
I-500ml I-Oile emnyama kunye neViniga Cruet eneziphuli kunye noMsebenzi
Uyilo olungashukumiyo: -I-18/8 intsimbi engenasici ngesiciko sokutywina, inalzle yesitofu ilingana kakuhle nomzimba webhotile, uphephe uthuli ngokupheleleyo. Wonke umntu unokugalela kwaye usasaze ioli yokupheka kunye nokuhamba kakuhle ngaphandle kokuvuza. Ifanelekile ukudibanisa ioyile yokupheka, isithsaba kunye neviniga.
Umthamo: 500ml / 17 oz
Ukuphakama: 300mm / 11.8 intshi
Ububanzi: I-58mm / 2.28 intshi
Umbala: ngumbala omdaka okanye ngokwentando yakho
Isaphulelo seoyile emnandi: -Iibhotile zeoyile yeglasi yeoyile yeglasi yomnquma ngeplahlzzle yomnxeba yenza ukuba kusengqiqweni ngakumbi ukusasaza ioyile- okukhokelela ekusetyenzisweni kweoyile encinci kunye nokutya okunempilo.
Gcina ioyile yakho yomnquma incinci: -iglasi emdaka emnyama ikhusela ngokufanelekileyo ioyile kwimitha yelanga, yandisa kakhulu ubomi bayo beshelufu. Isikhafu esimnyama kunye nekheyini yangaphakathi emhlophe yenza ukuba kube nako ukugcina ixesha elide lokutywina.
Sombulula iingxaki zokugcwalisa: I-18/8 ye-inshorensi yentsimbi engenasici inceda ukuzalisa nokuzalisa ulwelo ngokulula ngaphandle kokuvuza. Gcina yonke into icocekile kwaye ikuncede ukhuphe izandla ezinamathele.
Ukuthenga ngaphandle kwengozi:-Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi kwaye siya kuzama konke okusemandleni ukufumana isisombululo esifanelekileyo ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
I-Hoyerglass 17 ibhotile yeoyile ye-oyile yeglasi ikwenza ukuba:
1. 18/8 i-funment yentsimbi engenasiseko inceda ukugcwalisa kunye nokuzalisa ulwelo ngokulula ngaphandle kokuvuza.
2. 18/8 ispain yentsimbi engenasiphene kunye nebhotile etywiniweyo yokugcina uthuli ngaphandle.
3. Iglasi emdaka emnyama ikhusela ngokufanelekileyo ioyile kwimitha yelanga, yandisa kakhulu ixesha lokugcina.
4. Yenza kube lula ukusasaza isixa esifanelekileyo seoyile-sebenzisa ioyile encinci kwaye utye ukutya okunempilo.
Unonophelo kunye nokucoca:
1. Zonke iinxalenye zebhotile yeoli yomnquma yeHoyerglass zinokuhlamba kwisitya sokuhlambela.
2. Musa ukusebenzisa uboya besinyithi, iblitshi, okanye isicoci esomeleleyo sokugaya. Ukuba uthatha isigqibo sokuhlamba ngesandla, sebenzisa isicoci sokuthambisa kunye namanzi ashushu.
Ubungakanani Umthamo: 500 ml Umphakamo: 30 cm Ububanzi: 5.8 cm
Umthamo: 17 oz Ukuphakama: 11.81 intshi Ububanzi: 2,28 intshi
Umbala Emnyama mdaka Ukuprinta okanye ukwenza umbala usebenze wamkelekile
Edlulileyo: I-2 oz Amber Round Glass Jar ene-Inner Liner kunye neLid emnyama
Okulandelayo: Ityuwa kunye nePepper Grinder Mill
iibhotile zeoyile kunye neviniga
ibhotile yeoyile yokupheka
ibhotile ye-oyile yeglasi
Isitya sebhotile yeoyile
ibhotile yeviniga yeoli